डाक्टरले नै चिन्न बाँकी रोगको जोखिममा नेपाली
Article Dr. Ranjit Sah on Sun, Aug 05 2018 11:17 AM 951 Views0Comments No recommendations yet !!!
१७ साउन, काठमाडौं । तीन वर्षअघिको वर्षायाममा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाकी ४५ वर्षीया एक महिला त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुन आइपुगिन् । उनले बताएका रोगका लक्षण केही सामान्य र केही असामान्य थिए ।
रोग जँचाउनका लागि आफूले नेपाल र भारतका धेरै अस्पताल चहारिसके पनि निको हुनु त कता हो कता, कसैले पनि के भएको हो पत्ता पनि लगाउन सकेनन् भन्ने ती महिलाको गुनासो थियो ।
उनलाई जाँच गर्ने अधिकांश डाक्टरले उनको कलेजोमा ‘सिरोसिस’ भएको बताई त्यसैअनुसार औषधी चलाएका थिए । तर, कुनै औषधीले पनि खासै प्रभावकारी काम गरेका थिएनन् । ती महिलाले बताएका सबै लक्षणका आधारमा शिक्षण अस्पतालको एक विशेषज्ञ समूहले उनको रोग सिरोसिस नभई अन्य केही भएको पत्ता लगायो । नभन्दै उनको रोग दुई हप्तामै निको भयो ।
‘विधिसम्मतरूपमा मानव फ्यासिओलिसिस पुष्टि भएको यो नै पहिलो नेपाली घटना थियो,’ ती महिलाको रोग पहिचान गर्ने समूहमा संलग्न डा. रञ्जित साह भन्छन्, “हुन त यो नै नेपालको पहिलो मानव फ्यासिओलिसिस केस भने होइन । दशकौँ अगाडिदेखि नै यो रोगले नेपालीहरूलाई गाँजेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । हालसम्म नेपालमा कम्तिमा १२ जना यस्ता बिरामी भेटिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जानकारी गराइएका यस्ता घटनाको सङ्ख्या भने दुई मात्र छ ।’
अस्पतालको माइक्रोबायोलोजी विभागका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. साहको भनाइअनुसार यो रोग आफैँमा त्यति ठुलो समस्या होइन । ठूलो समस्या त यसको पहिचानको असक्षमता हो । नेपालमा पनि फ्यासिओलिसिसको समस्या विद्यमान छ भन्ने ज्ञान भएका एकदमै थोरै व्यक्तिहरूमध्ये आफू एक भएको उनको दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘अरू त अरू, अस्पतालमा बिरामीको रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्ने दायित्व बोकेका अधिकांश डाक्टर नै यो रोगबारे बेखबर छन् ।’
त्यसैले त प्रायः डाक्टरहरूले फ्यासिओलिसिसका बिरामीलाई कलेजोको क्यान्सर तथा सिरोसिसको बिरामी मान्ने गरेका छन् । उनीहरू त्यसैअनुसार औषधी सिफारिस गर्दछन्, फलतः आफ्नो रोगभन्दा अन्य बिमारका लागि खानुपर्ने औषधीले बिरामीमा नकारात्मक असर पर्न थाल्छ । कहिलेकाँहि त बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ ।
‘त्यसैले हामीले यस विषयमा सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सचेत बनायौँ भने मात्र बिरामीहरूलाई यो गम्भीर समस्याबाट बचाउन सकिन्छ,’ उनको तर्क छ ।
थप जानकारीको लागि तलको लिन्क क्लिक गरनु होला !
Human fascioliasis: An emerging life-threatening disease is testing Nepal’s doctors